ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကာတာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi အား လက်ခံတွေ့ဆုံ Post date: 07/25/2017 - 09:12 ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည် ကာတာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Read More ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းMYPOL ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ Post date: 07/24/2017 - 19:29 ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောင်းလဲရေး အတွက် အကူအညီပေးနေသည့် MYPOL ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာ ဆောင်အမှတ် (I-1) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
Read More ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၃၂)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ Post date: 07/24/2017 - 18:02 ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၃၂)ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့ နံနက်(၁၀) နာရီတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Read More ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၃၁ ရက်မြောက် နေ့ကျင်းပ Post date: 07/24/2017 - 17:56 ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၃၁ ရက်မြောက် နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Read More နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) နှင့် ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရေးနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင် နေကြ ရသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး Post date: 07/24/2017 - 15:44 နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော် ရှိ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနအစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
Read More ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ် Post date: 07/22/2017 - 19:58 ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားပြန်လည် သန်စွမ်းရေးဆေးရုံသို့ ဂျပန်နိုင်ငံ International University of Health and Welfare (IUHW) မှ လှူဒါန်းသော ကိုယ်အင်္ဂါ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်မြို့နယ် ကျိုက်ဝိုင်း ဘုရားလမ်းနှင့် မင်းဓမ္မလမ်းဒေါင့်ရှိ အဆိုပါ ဆေးရုံအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Read More ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ Post date: 07/22/2017 - 19:41 ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဇူလိုင် ၂၁ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီ (John F Kennedy) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ထွက်ခွာရာ ဇူလိုင် ၂၂ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ည ၇ နာရီ မိနစ် ၅၀ တွင် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
Read More ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်) တွင် ဆေးပြား/ဆေးတောင့် ထုတ်လုပ်မှု အဆောက်အဦဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ Post date: 07/22/2017 - 19:29 စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)၏ ဆေးပြား/ ဆေးတောင့် ထုတ်လုပ်မှု အဆောက်အဦ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ဇူလိုင် (၂၂)ရက် နံနက်၈နာရီခွဲတွင် ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်) ၏ New BPI စီမံကိန်းနေရာတွင် ကျင်းပသည်။
Read More မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရုပ်ရှင်ပွဲတော် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ရေး အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲများ၊ ပဒေသာကပွဲများတွဲဖက် ကျင်းပသွားမည် Post date: 07/22/2017 - 19:07 မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖျော်ဖြေရေး အနေဖြင့် အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲများတွဲဖက်၍ ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအငြိမ့်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ သိရသည်။
Read More ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်နှင့် မစ္စယန်ဟီလီ သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များ ဆွေးနွေး Post date: 07/22/2017 - 08:21 ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ မစ္စယန်ဟီလီအား ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည်